တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကားတစီးဖြင့် ခရီးသွားခြင်း
Posted by မေဓာဝီ at 5:32 PM
လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာတွေထဲမှာ ရသအစုံ ပေးနိုင်စွမ်းတဲ့ ပို့စ်ပါပဲ.. ကွန်ဂရက်ကျူးလေးရှင်း အမ..
ဒီကားကြီးကို အမွေဆက်ခံကြရမဲ့နောက်လူတွေ အတွက်က တို့ဘိုးဘွားအမွေမို့ ချစ်မြတ်နိုးလျက်ရှိပေမဲ့..
ဒီလိုနဲ့တို့တစ်တွေလည်း ဆေးရောင်သစ်လွင် အင်ဂျင်အသစ်တပ်ထားတဲ့ ကားကြီးကိုတော့ စိတ်ထဲ မြင်ယောင်မိပါရဲ့.
1/04/2007 4:53 AM
အင်း ကားပေါ်ကလည်း မဆင်းချင် ကားပေါ်မှာလည်းမသေချင် ကားကလည်း အမြန်ပြင်ဖို့ လိုနေပြီနော်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမွေး အားတင်းထားပါ မမေ..
မမေတို့ ကျနော်တို့ တတ်စွမ်းရာ ပါဝင်ကြရပါမယ်..
1/05/2007 6:12 PM
what is magnificent thought!!
Bravo Ma Maydarwi.
1/07/2007 6:36 AM
အရေးအသား တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ အတွေးမမြင်တွေလည်း အများကြီးရတယ် ဆက်လက်အားပေးနေပါတယ် အစ်မ
ိမရောက်တာကြာပီ။ မအားတာရယ် အင်တာနက် ကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်တာရယ်ကြောင့်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမရေးတာတွေ တစ်ဝကြီးဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒူးသာဒူးအမရေ....
တစ်ချိြူ့ကိုက်တာလေးတွေကို ဒီက စာစောင်တွေမှာ တင်လို့ရမလား။
အစ်မရယ်တော်တော်စာရေးကောင်းပါလား။ မချီးကျူးဘဲမနေနိုင်ဘူးဗျာ။ အင်း... ဒီကားကြီးကိုပြင်ဖို့ကတော့ ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ တာဝန်ပါပဲအစ်မရယ်။ ခက်တာက ပြင်မယ့်သူတွေကိုယ်တိုင် ကိုယ့်အိုင်ဒီယာနဲ့ကိုယ် အမျိုးမျိုးဖြစ်နေသလားလို့ဗျာ။
Youtube မှာ တင်ထားတဲ့ လူမိုက်တို့၏သွားရာလမ်း (သီတဂူဆရာတော်) ရဲ့ ဗီဒီယို ကိုကြည့်ပြီးပြီးချင်းပဲ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိတာ... အင်း လူမိုက်... လူမိုက်...